'Ubhunyele indodakazi ngomgxabhiso yafa kubangwa ikhadi likagesi' - Ilanga News
Home Izindaba ‘Ubhunyele indodakazi ngomgxabhiso yafa kubangwa ikhadi likagesi’
‘Ubhunyele indodakazi ngomgxabhiso yafa kubangwa ikhadi likagesi’
Kuthiwa ubezama ukulamulela umyeni wakhe obejijinyezwa ngommese yindodakazi
Ushaqwe ngamaphoyisa ehleli emakhandleleni ezilele indodakazi yakhe owesifazane osolwa ngokuyibulala – okuvela ukuthi ibijijimeza uyise ngommese,
bebanga ukuthi akalithengi ikhadi likagesi.
UKHIPHE isidumbu umbango wokuthengwa kwekhadi likagesi ngesikhathi owesifazane waseGugulethu, eGreytown, ebhunyela indodakazi yakhe ngomgxabhiso obilayo ngoba evikela umyeni okuthiwa ubegwazwa ngumufi ngoMsombuluko.
ILANGA lithole ukuthi uNkz Thandeka Mhlongo (55), ushaqwe ngamaphoyisa ehleli emakhandleleni ezilele indodakazi yakhe, uNkz Zinhle Dube (23) – asolwa ngokuyibulala okuvela ukuthi ibijijimeza uyise, uMnu Mzonjani Dube ngommese, bebenga ukuthi akalithengi ikhadi likagesi, udla mahhala.
Kuthiwa konke lokhu kwenzeka nje, izingane zikamufi ezimbili ezineminyaka engaphansi kwewu-5, ziyabuka. Umakhelwane walo mndeni, uNkz Allen Ngcobo, utshele ILANGA ukuthi uNkz Dube ubejwayele ukuxabana nabazali bakhe, aze abachaphe ngenhla-mba kuzwe nomakhelwane.
Uthe kwesinye isikhathi ubeke azame ngisho ukubabeka isandla kubuka ngisho izingane zakhe, kuze kulamule omakhelwane.
“Sithole ukuthi ngoMsombuluko ufike kubo ephuzile, kukhona uni-na, uyise nezingane zakhe ezimbi-li, waqala wahilizisana noyise emsola ngokuba yindoda eyisina-phungana, ehlulwa wukondla
umndeni wayo, ehlalele ukukhangezwa yinkosikazi,” kusho uNkz Ngcobo.
Uthi umufi usole uyise ngokuthi udla imali yesibonelelo sezingane zakhe, uhlulwa wukuyofuna umsebenzi. UNkz Ngcobo uveze ukuthi umufi ukhuluma kanjena nje, ube-khalela ukuthi usekhathele ukuthengela abazali bakhe ikhadi li-kagesi ngemali yesibonelelo sezi-ngane zakhe.
“Ube esesola uyise ngokuba yi-sahluleki esihlulwa nawukuthe-nga ikhadi likagesi. Omakhelwane bebemuzwa ethuka uyise. Ngesi-khathi ekwenza konke lokhu, uni-na ubehleli kwelinye ikamelo nje-ngoba engumuntu oxhugayo.
“Sithole ukuthi uZinhle uthathe ummese ezama ukuyogwaza nga-wo uyise, unina wasukuma ngaleso sikhathi ngoba esezwa umyeni wakhe ekhala, ecela usizo. Udo-nse ibhodwe lomgxabhiso ebelibila esitofini wabhunyela ngalo indodakazi yakhe,” kusho uNkk Ngcobo.
Uthi umufi usuke ngaleso si-khathi wabalekela komakhelwa-ne, eyocela usizo.
“Khona ibuhlungu indlela asho-ne ngayo uZinhle kodwa ubeseba-khathazile abazali bakhe ebacha-pha ngenhlamba uma esephuzile,” kusho yena.
Amanye amalungu omphaka-thi akhulume naleli phephandaba, aveze ukuthi abazali bakamufi bebehlukumezekile ngenxa yo-kwedelelwa nguyena uma esephu-zile.
“Khona siyazwelana naye nge-ndlela ashone ngayo, kodwa kuya-caca ukuthi ukuba unina aka-mbhunyelanga ngomgxabhiso, ubezobulala uyise,” kusho elinye ilungu lomphakathi elikhulume neLANGA ngombandela wokunga-dalulwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule icala lokubulala kanti kuboshwe owesifazane okulindeleke ukuba avele enkantolo khona maduze.
Previous articleIsizathu se-Orlando Pirates sokuqasha uNcikazi
Next articleIzingubo zebhantinti zikhiphe isidumbu